Windows DVD Onye kere bụ otu n'ime quickest na kacha ngwaọrụ na-eme DVD si Windows Vista na Windows 7 ejikwara PC na n'ụzọ dị ịrịba ama na-ewu ewu na n'ọtụtụ ebe na Windows ngwa. The DVD nke na-mere si Windows DVD Onye kere na-aduak iji na obere DVD Player ma ọ bụ DVD Player n'ụlọ. Dị iche iche nke disks ike ga-eji dee. DVD + R, DVD + RW, DVD-R, DVD-RW na DVD-ROM ụfọdụ na-ewu ewu disk ụdị na ike ga-dere site Windows DVD Onye kere akwado gị DVD edemede ngwaike. Ma ọ bụghị na a gụnyere Blu-Ray disk dee site Windows DVD kere ya. Windows DVD Onye kere atụmatụ na-akwado faịlụ nwere agbanwebeghịkwa na Windows Vista na Windows 7. Ya mere, ebe a a table e nyere maka faịlụ format nke na-akwado ma ọ bụ na-akwado ka Windows DVD kere ya.
List nke na-akwado Input Formats
Foto dị Files
Diblateyim, EMF, WDP
Ndepụta nke mmepụta File Formats
Akwado Video Formats
DVD mmepụta Format
Kedi Input File Formats
MP4, FLV, MKV, 3PG, kechie
ICO, JP2, TGA, TARGA, ICB, PIX, wdg
Atụ aro Nhọrọ
Windows DVD Onye kere mkpa ndị ọzọ ọzọ ụzọ maka kedi faịlụ formats dee na DVD. Ụfọdụ codec nwere ike ibudata na-eme ka a ole na ole faịlụ formats dakọtara na Windows DVD kere ya. Ebe a bụ ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ iji ihe ngwọta kedi faịlụ formats ma ọ bụ codec.
Nhọrọ 1: Iji Alternative Video Editor
nhọrọ 2: tọghata Video File Format
Jiri Alternative DVD burner - Wondershare DVD Creator
Ngwọta na-ekwekọghị File Formats ma ọ bụ Codec ga-eduga gị ịhọrọ ọzọ DVD burner. Ị nwere ike ibudata Wondershare DVD Creator site na njikọ: Wondershare DVD Creator. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa na ụzọ dị mfe iji ọkụ gị DVD, na ọ pụrụ ịbụ a mma ọzọ ka Windows DVD kere ya. Ị nwere ike nweta ọrụ na-ọkụ gị DVD maka audio, Video ma ọ bụ Pictures maka ihe ọ bụla faịlụ formats. SD video formats, ọbụna HD video formats na-akwado ka a masterpiece DVD burner.
Tọghata Ò Kwekọrọ n'Ozizi Format Iji Wondershare Video Ntụgharị
Ọzọ, ụfọdụ faịlụ gaghị nsure, ma ọ bụ i nwere ike ọzọ ụzọ iji Windows DVD Onye kere site Wondershare Video Ntụgharị na ị nwere ike mfe ibudata ya site na njikọ: Wondershare Video Ntụgharị.
Wondershare Video Ntụgharị bụghị nanị a Ntụgharị maka video kamakwa ọ bụ a zuru ezu ma dị ike video toolbox nke ga-enye ihe ùgwù nke edezi, ime, nbudata, converting, na-ahazi, akada, na-ere ọkụ na-ekiri vidiyo na ihe karịrị 150 formats. Ọ nwere ike mfe-abụ ezigbo ọzọ ka Windows DVD Onye kere ruru ya nnukwu faịlụ Ọkpụkpọ na-akwado na a DVD burner n'ime a Ntụgharị ngwá ọrụ.
Top 10 Mpụga DVD Burners
Top 10 Best Free Alternatives ka PowerDVD
Olee otú Ọkụ DVD maka Free na DVD kpatụ aka gaa na
> Resource> DVD> Windows DVD Onye kere - akwado File Formats